ब्रुनाईविरुद्ध नेपालले कोको फरवार्ड खेलाउनु पर्ला? | Hamro Khelkud
ब्रुनाईविरुद्ध नेपालले कोको फरवार्ड खेलाउनु पर्ला?
सोमबार, कात्तिक २२, २०७३
कुचिङ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी सोलिडारिटी कप अन्तर्गत नेपालले ब्रुनाईविरुद्ध समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्दैछ। पहिलो खेलमा फितलो आक्रमणका कारण गोलरहित बराबरीमा अड्किएको नेपालको लागि समूह विजेता बन्न यो खेल जित्नै पर्ने समीकरण रहेको छ।
पहिलो खेलमा नवयुग श्रेष्ठ र बिमल घर्ति मगरले सुरुवाती एघारमा आक्रमण सम्हालेका थिए भने सुजल श्रेष्ठ र अन्जन बिष्ट विङ्गसमा थिए। खेलको ६०औं मिनेटमा भरत खवासले नवयुग श्रेष्ठ स्थान लिएका थिए र केहि सुनौलो अवसरको सिर्जना पनि गरे खेलको सुरुवातमा नवयुगले पाएको मौका सदुपयोग गर्न सकेनन। दोश्रो हाफको सुरुवातमै उनले प्रहर गरेको सट पोष्टमा लागेर फर्किएको थियो।
भारत खवासले वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा आएर राम्रो प्रदर्शन गरेकाले उनको ब्रुनाईसंग सुरुवाती एघारमा पर्ने सम्भावना धेरै छ। कप्तान अनिल गुरुङ अन्जन बिष्टको ठाउँमा ७७ मिनेटमा आए पनि उनले खासै केहि गर्न सकेनन। पाएको एक दुइ मौकामा पनि उनि चुकेका थिए, त्यसैले उनको सम्भावना निकै कम देखिएको छ।
मिडफिल्डमा हेमन गुरुङको प्रदर्शन केहि खस्किएकोले प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजिले आक्रामक मिडफिल्डरका रुपमा भरत वा अन्जनलाई खेलाएर केहि फेर बादल गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बिमलले अन्तिम केहि समय विंगसमा राम्रो प्रदर्शन गरेकाले उनले त्यहाँबाट खेल्न पनि सक्नेछन।
तपाईंको विचारमा नेपालको आक्रमण कसले सम्हाल्ने छ त?
रोनाल्डो प्रशिक्षकसँग रिसाएपछि…
टि२० विश्वकप छनोट : लोकेश र विवेक पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा
एट्लेटिको म्याड्रिड बाहिरियो